Wararka - Sidee 5G uga shaqeysaa dhulka hoostiisa?
Taariikh iyo Sharaf
Soocelinta VHF / UHF
CDMA800 / GSM850Mhz Soocelinta
Ku celceliyaha Tetra
Soocelinta Tetra 400Mhz
Ku celcelinta Tetra 800Mhz
iDEN 800MHz Soo Celinta
Ku celcelinta ICS
Soocelinta GSM 900MHz
Soo Celinta DCS 1800MHz
3G UMTS / WCDMA Soo Celinta
4G LTE 2600mhz Soocelinta
Kiciye Kali ah
Kiciye Laba Xidigle ah
Ku celcelinta Walkie talkie
Sidee 5G uga shaqeysaa dhulka hoostiisa?
10W PCS 1900MHz faa'iido sare taleefanka gacanta taleefanka re ...
2W CDMA800MHz band ballaaran wireless Repeater
10W GSM 900 ICS wireless taleefanka gacanta signal Repeater
30W Tetra800MHz Band-celiyeyaasha Xulista
37dBm IDEN800 5W Band Soo Celinta Xulista
2W IDEN800 + 33dBm Band Soo Celinta Xulista
5W Tetra800MHz Band-celiyeyaasha Xulista
5G waa jiilka 5-aad ee tikniyoolajiyadda bilaa-waayirka ah. Isticmaalayaashu waxay ku ogaan doonaan inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu dhaqsaha badan, teknoolojiyada ugu adag adduunka ee waligeed arag. Taasi waxay ka dhigan tahay deg deg deg deg ah, dib u dhac aad u hooseeya, iyo saameyn weyn oo ku saabsan sida aan u nool nahay, u shaqeyno, iyo ciyaarista.
Si kastaba ha noqotee, dhulka hoostiisa qotoda dheer, waxaa jira tareennada dhulka hoostiisa mara ee tunka. Daawashada fiidiyowyo gaagaaban taleefankaaga ayaa ah hab fiican oo lagu nasto tareenka dhulka hoostiisa mara. Sidee 5G u dabooshaa uguna shaqeeyaa dhulka hoostiisa?
Iyadoo lagu saleynayo isla shuruudaha, 5G metro caymis waa arrin muhiim u ah hawl wadeenada Isgaarsiinta.
Marka, sidee ayuu 5G uga shaqeeyaa dhulka hoostiisa?
Saldhigga Metro wuxuu u dhigmaa sagxad dhowr dabaq ah, waxaana si fudud loogu xallin karaa xalal dhaqameed dhisme ama nidaamyo cusub oo firidhsan oo loo qaybiyey hawlwadeennada. Hawl wade kastaa wuxuu leeyahay qorshe aad u bislaaday. Waxa kaliya ayaa ah in la geeyo sidii loogu talagalay.
Sidaa darteed, tunnelka dhulka hoostiisa mara ee dhererkiisu waa diiradda caymiska tareennada dhulka hoostiisa mara.
Marinnada dhulka hoostiisa mara waa sida caadiga ah in ka badan 1,000 mitir, oo ay weheliyaan cidhiidhi iyo foorar. Haddii la adeegsanayo anteenada jihada ah, xagalka daaqa calaamaddu wuu yar yahay, kor u kaca ayaa dhakhso noqon doona, waana sahlan tahay in la xannibo.
Si loo xalliyo dhibaatooyinkaas, calaamadaha bilaa-waayirka ah waxay u baahan yihiin in si isku mid ah loogu sii daayo jihada tunnelka si loo sameeyo dabool is-beddel toosan, taas oo aad uga duwan tan saddexda qaybood ah ee xarunta macro ee dhulka. Tani waxay u baahan tahay anteeno gaar ah: fiilo qulqulaya.
Guud ahaan, fiilooyinka hijrada-hirarka, oo loo yaqaanno quudiyayaal, waxay u oggolaanayaan calaamadda inay ku dhex socoto xarig xiran, kaliya ma daadin karto calaamadda, laakiin luminta gudbinta waxay noqon kartaa mid yar sida ugu macquulsan. Marka si astaamaha si hufan looga wareejin karo qeybta fog ee anteenada, ka dibna hirarka raadiyaha si hufan loogu gudbin karo anteenada.
Dhinaca kale, fiilada qulqulaya way ka duwan tahay. Fiilooyinka daadanaya si buuxda uma gaashaaman. Waxay leedahay meel si isku mid ah loo qaybiyey oo ka baxaysa, taas oo ah, fiilada qulqulaya oo ah meelo yaryar oo taxane ah, waxay u oggolaaneysaa calaamadda inay si siman uga soo baxdo booska.
Marka taleefanka gacanta uu helo astaamaha, astaamaha waxaa loo diri karaa booska loogu talagalay gudaha xarigga ka dibna loo gudbin karaa Saldhigga Saldhigga. Tani waxay u oggolaaneysaa isgaarsiinta laba-dhinac ah, oo loo qaabeeyey duruufaha toosan sida tunnelka metro, oo la mid ah sida u beddelaya nalalka iftiinka dhaqameed tuubooyin dhaadheer oo dhaadheer.
Caymiska qadka dhulka hoostiisa mara waxaa lagu xalin karaa fiilooyinka daadanaya, laakiin waxaa jira arrimo u baahan in la xaliyo hawl wadeenada.
Si loogu adeego isticmaaleyaashooda, dhammaan hawlwadeennada waxay u baahan yihiin inay fuliyaan caymiska metro. Marka la fiiriyo booska tuneelku ku yar yahay, haddii hawl wade kasta dhismo qalab ah, waxay noqon kartaa kheyraad qashin iyo dhib. Marka waxaa lagama maarmaan ah in lala wadaago fiilooyinka daadanaya oo la adeegsado qalab isku daraya noocyo kala duwan oo ka kala socda shirkadaha kala duwan una diraya fiilada qulqulaya.
Qalabkan, oo isku daraya calaamadaha iyo muuqaalka ay ka imanayaan hawlwadeennada kala duwan, ayaa loo yaqaan 'Point of Interface' (POI) Combiner. Isku-darka waxay leeyihiin faa'iidooyinka isku-darka calaamadaha badan iyo luminta gelinta hoose. Waxay khuseysaa nidaamka isgaarsiinta.
Sawirka soo socdaa wuxuu muujinayaa, isku darka POI wuxuu leeyahay dhowr dekedo. Wuxuu si fudud isugu dari karaa 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, iyo 2600MHz iyo mowjadaha kale.
Laga bilaabo 3G, MIMO wuxuu galay marxaladda isgaarsiinta moobaylka, isagoo noqday habka ugu muhiimsan ee lagu kordhin karo awoodda nidaamka; by 4G, 2 * 2MIMO wuxuu noqday istaandarka, 4 * 4MIMO waa heer sare; illaa 5G era, 4 * 4 MIMO waxay noqotay halbeegga, inta badan mobilada ayaa taageeri kara.
Sidaa darteed, caymiska dhulka hoostiisa mara ee metro waa inuu taageeraa 4 * 4MIMO. Sababtoo ah kanaal kasta oo ka mid ah nidaamka MIMO wuxuu u baahan yahay anteeno madax-bannaan, daboolidda tunnel-ka waxay u baahan tahay afar fiilooyin is-barbar socda oo daadanaya si loo gaaro 4 * 4MIMO.
Sida sawirka soo socdaa uu muujinayo: 5G unit fog oo ah isha ishaar, waxay soo saartaa 4 calaamadood, iyaga oo isku daraya calaamadaha hawlwadeenada kale adoo adeegsanaya isku duwaha POI, kuna quudi 4 fiilooyin isku mid ah oo daadanaya, waxay ku guuleysaneysaa isgaarsiinta labada marin ee badan . tani waa habka ugu toosan uguna wax ku oolka badan ee lagu kordhiyo awoodda nidaamka.
Xawaaraha sare ee tareenka dhulka hoostiisa ah, xattaa fiiqashada fiilada si loogu daboolo qorshaha qadka, mobilada ayaa si isdaba joog ah loo beddelayaa oo dib loogu dooranayaa isgoyska goobta.
Si loo xalliyo dhibaatadan, waxay ku milmi kartaa dhowr bulsho oo ka mid noqon karta beel weyn, macquul ahaan waxaa iska leh hal beel, sidaasna waxay ku sii fideysaa dhowr jeer tebinta beel keliya. Waad iska ilaalin kartaa beddelka iyo dib u dhigista marar badan, laakiin awoodda ayaa sidoo kale la dhimay, waxay ku habboon tahay meelaha taraafikada yar ee isgaarsiinta.
Thanks to isbeddelka isgaarsiinta moobiilka, waxaan ku raaxeysan karnaa calaamadaha moobiilka wakhti kasta, meel kasta, xitaa dhulka hoostiisa.
Mustaqbalka, wax walba waxaa loo baddelayaa 5G. Xawaaraha isbeddelka tikniyoolajiyadda ee tobannaan sano ee la soo dhaafay ayaa ahaa mid deg deg ah. Waxa kaliya ee aan si hubaal ah u ogaanay ayaa ah, in mustaqbalka, ay xitaa sii dhaqso badan doonto. Waxaan la kulmi doonnaa isbeddel farsamo oo dadka, ganacsiyada, iyo bulshada guud ahaanba wax ka beddeli doonta.
Waqtiga dhejinta: Feb-02-2021
Telefoon: + 86-595-28857991
Waa maxay PIM
Xiriirka shabakadda gaarka loo leeyahay ee COVID-19
Sanad Wanaagsan 2020
Fasaxa Sannadka Cusub ee Shiinaha ee 2020 (Feeraha Gu'ga ...